”TOTTI waa kaligii wiil tiisa eegte ah” – Maria Sensi – Gool FM
”TOTTI waa kaligii wiil tiisa eegte ah” – Maria Sensi
Raage September 30, 2016
(Roma) 30 Sebt 2016 – Maria Sensi, oo ah carmasha uu ka geeriyoodey madaxwaynihii AS Roma ee Franco Sensi, ayaa ku eedaysey Francesco Totti inuu yahay ‘tiisa eegto anaani ah gaar ahaan qaabka uu ula macaamilo qoyskooda.
Totti ayaa Talaadadii u dabaal degey gugiigii 40-aad, wuxuuna caan ku yahay inuu yahay astaanta kooxda Roma, balse Marwada Sensi waxay ku doodaysaa in laga badbadiyay daacadnimadiisa ku aaddan naadiga maaddaama aan iyada iyo gabadheeda Rosella – aan lagu marti qaadin xafladdii dhalashada laacibkan – “oo wax kasta isagu isku gaar yeelay”.
“Totti waxaan u qaybin lahaa laba qaybood. Laacib ahaan sanad kasta waxaan siin lahaa Ballon d’Or, balse nin ahaan runtii waan ka niyad jabsanahay.” ayay ku tiri Radio Radio.
“20 sano ayay isku xirnaayeen isaga iyo qoyska reer Sensi, way fiican tahay inuu nala joogey, balse misna waan ku dadaalney, odaygeeygii iyo gabadhaydu waxay wax kasta u faleen inuu joogo, waxaa xitaa nagu caawisay hooyadii Fiorella, waayo waxaan wiilkeeda caawinnay xilli uu aad noogu baahnaa.” ayay raacisay.
“Xitaa odaygaygii wuxuu dartii ula dagaalay Zavala, oo ahaa wakiilkii hore ee Totti, anigu kolleey xafladdiisa ma tageen, balse gabadhaygu way ka niyad xumaatay, Totti wax badan buu Roma u taray, lkn dhanka qoyska reer Sensi waa markii 3-aad ama 4-aad oo uu khalad naga gelayo.” ayay ku dartay.
“Xitaa wuxuu ka maqnaaday xaflad khayriyad ah oo ka shaqeeysa in dhiig loogu deeqo dadka u baahan, runtii waan ka xumaannay.” ayay ku soo jartay.
Horyaalka Serie A-da oo markii ugu horreeysey dhaqan gelinaya hannaan uusan jirin horyaal kale oo adeegsadey!
Marco Van Basten oo sheegay inay AC Milan kusoo noqon doonto booskeedii + Sawirro